यी छुट्टीहरू बनाउनको लागि १० उत्तम थर्मोमिक्स क्रिसमस रेसिपीहरू ThermoRecines
इरेन आर्कास | | क्रिसमसको, थर्मोमिक्स रेसिपीहरू
क्रिसमस आउँदैछ र हामी सबै क्रिसमस मेनूहरू बारे सोचिरहेका छौं जुन हामी यस बर्ष तयार गर्नेछौं। तपाईहरु मध्ये धेरैले हामीलाई अधिक पारंपरिक व्यंजनहरु र अरुहरु अरु बढी नवीनको लागि सोधिरहेका छौं। त्यसो भए, हामीले यो लेख यससँग लेखेका छौं शीर्ष १० ब्लगमा सबैभन्दा सफल क्रिसमस रेसिपीहरू।
हामी आशा गर्दछौं तपाईंले तिनीहरूलाई मनपराउनुहुनेछ! तर हामीलाई के कुराको बारे निश्चित छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई तपाईंको परिवारका सदस्यहरूलाई अचम्मित र खुशी पार्न केही राम्रो विचार दिन्छन्।
मेरी क्रिष्टमस मित्रहरू र अमेरिका संग तपाईं एक अधिक वर्ष अनुसरण गर्न को लागी धन्यवाद !!
1 तातो चकलेट
2 क्रिसमस लग
3 रोजकन डे रेस
4 दुई फोडामा सुँगुर सुँगुर
5 मासु र पाटेको साथ क्यान्नेलोनी
6 Cava मा हाक
7 समुद्री खाना सूप
8 झींगाको साथ रूसी क्रिसमस सलाद
9 Bourguignon गाल
10 पोल्वरोन स्पंज केक
प्रत्येक क्रिसमस यो बर्षको पहिलो दिन सुरू गर्न एक राम्रो तातो चकलेट छ परम्परा को अधिक भइरहेको छ। यो एक धनी संग साथ roscón de रेस, संयुक्त राष्ट्र प्यानेटोन वा केहि Churros र यो एकदम शो हुनेछ।
क्रिस्मस समारोहहरूको लागि धेरै नै मौलिक र सबैभन्दा सुन्दर रेसिपी। यो तपाइँको तालिका सज्जित हुनेछ, यो मिठाइको राजा हुनेछ र साना बच्चाहरूलाई यो मनपर्नेछ यो मीठो मीठो आनन्द लिनुहोस्। एक सुन्दरता मिठाई बनाया।
रोजकन डे रेस
सबै स्वाद र घरमा बनाइएको चीजहरूको हेरचाहको साथ। एउटा शानदार परिणामको साथ लामो तर सरल विधि। तपाईं यस पारम्परिक क्रिसमसको मिठोसँग यसको स्वाद र बनावटको लागि प्रेममा डुब्नुहुनेछ।
दुई फोडामा सुँगुर सुँगुर
का लागी एक आश्चर्यजनक नुस्खा परम्परागत तर धेरै साधारण डिशको साथ हाम्रो पाहुनाहरूलाई खुशी पार्नुहोस्। हामी दुबै खाना पकाउने अवसर लिनेछौं: पहिले हामी यसलाई भुसुने झोला भित्र पकाउनेछौं, पछि हामी यसलाई भट्टीमा स्वादिष्ट ग्रेटिन दिएर समाप्त गर्नेछौं। एक उत्तम विधि जुन तपाईं अग्रिम तयारी गर्न सक्नुहुन्छ।
मासु र पाटेको साथ क्यान्नेलोनी
क्रिसमस भोजनको एक क्लासिक, एक वास्तविक आनन्द। यी मासु र pété cannelloni अचूक छन्। द्रुत र सजिलो, एक शानदार स्वादको साथयदि तपाईं आफूलाई भान्छाकोठामा बृहत्‌ विवरणको साथ जटिल बनाउन चाहनुहुन्न, कुनै श doubt्का बिना, यो तपाईंको थाल हो।
Cava मा हाक
कावामा हाकको लागि यो नुस्खा स्वादिलो ​​भाँडा हो, क्रिसमस डे वा कुनै अन्य पार्टी वा पाहुनाहरूसँगको विशेष साँझ जस्ता छुट्टीको लागि उपयुक्त। यो एउटा हल्का र थाल बनाउन सजिलोयद्यपि यसको विशेष काभा स्वादले यसलाई एकदम विशेष डिशमा परिणत गर्नका लागि उत्तम बनाउँदछ।
समुद्री खाना सूप
क्रिसमसको लागि क्लासिक स्टार्टर, स्वादिष्ट र धेरै स्वादिलो। हामीले पछि हाम्रो क्रिसमस मेनूमा राखेका सुकुल व्यंजनहरूसँग तपाईंको मुख सुरु गर्न, यो समुद्री खाना सूप एक सफलता हो। स्वाद, बारीक र विभिन्न बनावट को पूर्ण, यो एक 10 डिश हो।
झींगाको साथ रूसी क्रिसमस सलाद
एक स्टार्टर को रूप मा प्रस्तुत गर्न को लागी एक अविश्वसनीय नुस्खा। हामी यस रूसी सलादलाई यसका साथ झिंगा र केही रातो लुगाहरूका लागि बिभिन्न र विशेष स्पर्श दिनेछौं जसले यसलाई भिन्नताको अनौंठो स्पर्श दिन्छ। एक सजिलो नुस्खा, जुन हामी अगाडि तयार गर्न सक्छौं र त्यो, कुनै श doubt्का बिना, एक निश्चित सफलता हुनेछ।
यदि तपाईं यस क्रिसमसमा सफल हुन चाहानुहुन्छ भने, यी बोर्गुइगन गालहरूले तपाईंको लागि यसलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ। शानदार हुनुको साथै, तिनीहरू यति सरल छन् कि उनीहरू तपाईंलाई चकित पार्नेछन्। एक मासु डिश जुन तपाईं यो क्रिसमसको मुख्यको रूपमा सेवा दिन सक्नुहुन्छ र यसले कसैलाई उदासीन छोड्दैन।
पोल्वरोन स्पंज केक
के तपाईंसँग क्रिसमसको बचेको भागहरू छन्? क्रिसमस मिठाईहरूको फाइदा लिन यो आश्चर्यजनक केक तैयार गर्नुहोस्। तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो कस्तो उत्कृष्ट र नाजुक बनावट छ। र बिहानको खाजा वा नास्ताको लागि चिया वा कफीको साथ लिनु उत्तम हो।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: क्रिसमसको, थर्मोमिक्स रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » लेखहरू » विशेष व्यंजनहरु » क्रिसमसको » यी छुट्टीहरू बनाउनको लागि १० उत्तम थर्मोमिक्स क्रिसमस रेसिपीहरू
आजका लागि quick द्रुत डेसर्टहरू (क्रिसमस पूर्वानुमान)
क्रिसमसको लागि १० मीट रेसिपीहरू